UPeter unezimvo eziyi-221 zezinye iindawo.
Ukuzola, umbono wepanoramic weDanube, izitulo ezitofotofo, i-hammock, i-jacuzzi kwi-terrace kunye nemvakalelo engenakuchazwa ekubambisayo ujonge kumhlaba ongecala lomlambo. Indlu ifanelekile kwizibini ezifuna ukuphumla kwindlu ye-luxus cabin kwi-Danube Curve.
Siyalamkela ikhadi le-Otp SZÉP.
Ikhabhathi imi kwinduli yaseSzamaras ngaphezulu kweNagymaros. Umbono wokuqala xa ufika apha yimbono yeDanube kunye nenduli kwelinye icala. Ibalcony yethu enkulu yindawo egqibeleleyo yokuphumla enezitulo ezinkulu zengalo, ii-sunbeds ezikhululekile kunye ne-hammock. Ngaphakathi uya kufumana amagumbi amancinci kodwa axhotyiswe ngokupheleleyo. Ikhitshi-igumbi lokuhlala i-combo kunye negumbi lokuhlambela kumgangatho ophantsi kunye ne-nook yokulala kwi-attic.
Iindlela ezikufutshane zokunyuka intaba, uJulian lookout, iindlela zebhayisekile. I-Nagymaros inommandla okhulayo wenkcubeko kunye ne-gastronomic enemibala: imarike yomvelisi, indawo yokubhaka yesintu, i-ice cream eyenziwe ngesandla. Umgama omde lihlathi elingapheliyo laseBörzsöny kunye nololiwe omncinci, iVisegrád Citadel, iSiqithi iSzentendre, iKisoroszi Island Peak, iVerőce Beach, Esztergom, Vácrátót Arboretum…
Inombolo yomthetho: MA21002519
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Nagymaros